5 Android uye ios mitambo yakaita sungano yenyaya dzevateveri vehondo huru
Kuru Nhau & Ongororo 5 Android uye mitambo yeIOS senge League of Legends kune vateveri vehondo huru
5 Android uye mitambo yeIOS senge League of Legends kune vateveri vehondo huru
League of Legends inozivikanwa yePVP yehondo mutambo mutambo uyo & apos; s zvakare inozivikanwa kunge cyber mutambo wezita. Parizvino, ma & apos; haawanikwe pane nhare mbozha nekuda kwechimwe chikonzero, asi ichiva zita rine mukurumbira, kune akawanda maApple nemitambo yeIOS iyo inokwereta kubva kune yayo fomula uye yakajeka mavara maitiro. Isu & maapuro; takakomberedza mitambo mishanu inounza iwe chiitiko chakafananidzwa, chakazadzwa neanoonekwa akapfuma uye muhondo dzakawanda dzevazhinji.
LoM inopa inokurumidza-kumhanya chaiyo nguva PVP Hondo kurwisa AI nevamwe vatambi. Iwe unofanirwa kuparadza shongwe dzemuvengi nenzvimbo yavo tsvene kuti uwane kukunda mumitambo inogara ingangoita maminetsi mashanu kusvika gumi. Iwe unogona zvakare kugadzira zvikwata zvine hungwaru, kuvhima hofori yesango chikara, uye kudzora maChampions kuti uwane mukana wekurwisa muvengi.
Dhawunirodha zve Android
Nyika yeEtryna inotongwa nemashiripiti ane simba nevarwi vane simba, uye zviri kwauri kuti ubatanidze mauto emapoka anonyangadza kurwisa muvengi anotyisa. Mutambo uyu unobatanidza kurwa-nekumhanya kurwisa neesimba zano, ichikurega iwe kuraira yemauto emagamba kununura nyika. Kune makumi mapfumbamwe emazinga ehunhu hunoshanduka, pamusoro pezana nemakumi maviri ematanhatu tiered solo quests, uye makumi mana+ ekufungidzira magamba ekuunganidza, kushongedza, uye kuraira Iwe unokwanisa kuwana Global PvP kuti ubatane kuitira zvemasikati kana kukwikwidza 3-pa-3 hondo nevatambi vanobva mudunhu rako futi.
Nevanhu vave pamucheto kuti vaone chakavanzika chehupenyu husingaperi, ngirozi nemadhimoni akaipa vanoita chibvumirano chekuzivisa apocalypse kuti vagone kupfeka venyika chaiyo, kurwira vanhu kuti vakunde uye chengetedza denderedzwa rehupenyu rakabatana. SoulCraft inoita kuti iwe utambe sengirozi uye uchiita zvakawanda zvehack'n & apos; slash uye mugomba kukambaira. Inoratidzira zvinotyisa, zvine mavara mavara, kurwa munzvimbo chaidzo dzakadai seVenice, Roma, Hamburg, New York & Egypt; mashanu akasiyana emitambo modes anosanganisira nguva yekumhanya, nhandare, gehena, kukristaro kudzivirira uye kurwa naboss; uye akawanda evavengi vakasiyana uye zvombo, minondo, zvinhu, zvitsinga, zvishandiso, giya, uye kupamba.
Ngano Magamba chiito chaicho-nguva reroja mutambo ine inokurumidza uye yakasimba mitambo, 4 yakasarudzika yakasarudzika kugona pamunhu uye kugona kudzora magamba matatu mune imwechete MOBA machisi. Iwe unofanirwa kuchengeta kuenzanisa kufambira mberi kwegamba rega rega pamitambo uye kukudziridza akawanda acho sezvaunoda. Kune mamamepu makumi matatu anopa akasarudzika MOBA matambudziko kune vese vatambi. Iwe unogona zvakare kushandisa emagetsi kusimudzira mavara ako uye nekuvaita vanokurumidza, kusimba kana kuomarara.
Dhawunirodha zve Android kana ios
Irwa pamwe chete nemagamba nengirozi pakurwa neDhiabhorosi Mauto. Dzidza mashiripiti, kurwisa vamwe vakashinga varwi, uye vapinde nhare yeanotyisa Dhiabhorosi Muchinda. Unofanirwa kudzidzisa Mutumwa wako waunofarira uye uite kuti ikufambise munzira, kurwisa zvikara zvehuipi, shongedza magamba ako negiya rakanakisa, uye simbisa hutongi hwako munzvimbo dzepasirese nepasirose-nhandare.
ipad pro 12.9 kesi ine keyboard
Apple Watch Series 5 dhiri: tora madhora zana nemakumi mashanu paApple Watch Series 5 Nike edition
Metro neT-Mobile inofumura maviri mhondi 5G madhiri iwe aunogona kurongedza kumusoro
AT & T Galaxy S5 uye S5 Active pakupedzisira vanowana Android Marshmallow kugadzirisa